Duqeymo Diyaaradeed oo ka dhacay Gobolka Bari – Radio Muqdisho
Duqeymo Diyaaradeed oo ka dhacay Gobolka Bari
Wararka Saaka aanu ka helayno Gobolka Barri ayaa kusoo waramaaya in Duqeymo diyaaradeed ay ka dhaceen sdeegaanohoos yimaada Magaala xebeedka Qandala e Gobolka Bari.
Duqeymahaan ayaa lagu garaacay Xaruumo ay lahaayeen Kooxda Daacish ee ku dhuumaalaysanaaya Deegaano ka tirsan Gobolka Barri oo hoos yimaada Maamulka Puntland.
Diyaaradaha Dagaal ee Maraykanka ayaa shalay galinkii Dambe duqeeyay Buuralayda Gal gala oo ay ku dhuumaalaystaan Maleeshiyaad ka tirsan Daacish iyo Al shabaab dhanka kale Xalay ayaa duqeymo kale ka dhaceen deegaano hoos taga Magaalada Qandala.
Wariyaha Warbaahinta Qaranka ee Magaalada Boosaaso Maxamed Muuse Tarsan ayaa soo sheegay in duqeymahaan la Rumaysan hayay in ay ku dhinteen Horjoogayaal iyo Maleeshiyaad ka tirsan Daacish iyo Al shabaabka ka ku dhuumaalaysta Gobolka Barri.
Duqeymahaan saacadihii lasoo dhaafay ka dhacay Gobolka Bari ayaa qeyb ka ah Didaalada Dowladda Federaalka Soomaaliya oo kaashanaysa Beesha Caalamka ay Dalka kaga saarayso Maleeshiyaadka Nabad diidka ah ee Al shabaab.
Wafdi uu hogaaminayo Wasiirka Dastuurka XFS oo gaaray Koonfur Afrika
Akhriso Warbixin: Hindisaha Telefishinka & marxaladihii uu soo maray.